Hiran State - News: HS:-Khilaaf iyo kala shaki ka jira xarunta Villada
HS:-Khilaaf iyo kala shaki ka jira xarunta Villada
HS:- Raysil wasaaraha Soomaaliya Prof. C/wali Maxamed Cali oo dhawaan ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dillo oo ka dhacay Tiyaatarka Muqdisho ayaa la sheegayaa inuu adkeeyay amaanka qeybta uu ku hoydo ee guriga uu ka daganyahay Muqdisho.
Waxaana soo ifbaxaya macluumaad sheegaya feejignaan xoogleh iyo shaki uu ka qabo madaxda qaar.Madaxweyne Shariif Sh Axmed ayaa dhankiisa jeediayay hadallo uu ku dajinayo xaalada kadib qaraxii shakiga dhaliyay ee ka dhacay Tiyaatarka Golaha Murtida.
Dad kudhow madaxweynaha ayaa sheegay in Shariif mudo dheerba aysan isku wanaagsaneyn raysil wasaarihiisa inkasta uusan C/wali jeedin hadal adag oo cadaynaya khilaafka isaga iyo madaxweynaha.Laakin wuxaa la sheegayaa in raysil wasaaruhu aaminay inay wada socdaan khilaafka madaxweynaha iyo qaraxii Tiyaatarka ee uu kabadbaaday ahaana mid loogu talo galay in lagu qaarajiyo.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan M. Maxamuud oo aan dhankiisa soo saarin wax hadal ayaa la sheegayaa inuu udiray Muqdisho ciidamo ilaaliyo Raysil wasaaraha. Ilo wareed kusugan Garowe ayaa sheegaya in ciidamada loo diray Raysil wasaaraha ay yihiin kuwo si gaar ah u tababaran.Lama hubo heerka ay gaarsiisantahay xasaasiyadda siyaasadeed ee ka dhalatay isku daygii dil ee Raysil wasaare C/wali Gaas .
· admin on April 08 2012 20:41:04 · 0 Comments · 2021 Reads ·
14,581,073 unique visits